လူသတ်မှုရာသီ5မှအပိုင်း (၂) ပြန်လည်လွတ်မြောက်ခြင်းနှင့်အတူမည်သို့လွတ်မြောက်နိုင်မည်နည်း - Netflix မူရင်း
လူသတ်မှုရာသီ5မှအပိုင်း (၂) ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းရန် - မည်သူ၏သွေးသည်ဤနည်း?
HOLLYWOOD, CA - ဇန်နဝါရီ 05: Viola Davis သည်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၊ ဟောလီးဝုဒ်ရှိဇန်န ၀ ါရီလ ၅ ရက်၊ ဟောလီးဝုဒ်လမ်းလျှောက်ပွဲတွင်မင်းသမီး Viola Davis အားဂုဏ်ပြုသည့်အခမ်းအနားတွင် Viola Davis သည်လူသတ်မှုနှင့်အတူမည်သို့ရှောင်ကြဉ်ရမည်ကိုသရုပ်ဖော်ထားသည်။ (Matt Winkelmeyer / Getty Images မှဓာတ်ပုံ)
Bates မိုတယ်သည် 2017 တွင်ပြန်လာလာသောအခါ
Netflix တွင်အသစ်: Big Mouth ရာသီ2သည်ယခုစီးဆင်းနေသည် Peaky Blinders ရာသီ ၅: Tommy Shelby ကိုအရင်ကြည့်ပါ
လူသတ်မှုနှင့်အတူမည်သို့ဝေးရနိုင်ပုံ ဇာတ်လမ်းတွဲ (၂) တွင်ပြန်လာပြီး Annalize သည်တရားခွင်၌ပြန်လာပြီဖြစ်သည်။ ဤတွင်ယခုအပတ်ရဲ့ဒရာမာ - ဖြည့်ဇာတ်လမ်းတွဲ၏ပြန်လည်စုစည်းမှုပါပဲ။
ရာသီ5၏ဒုတိယဇာတ်လမ်းတွဲ လူသတ်မှုနှင့်အတူမည်သို့ဝေးရနိုင်ပုံ ယို - ထုပ်ပိုးဒရာမာနှင့်ပယောဂနှင့်ခဲ့သည်။ နောက်တဖန်အဖြစ်အပျက်ကျနော်တို့ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကရဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲ၌ကျန်ကြွင်းခဲ့သည်နက်နဲသောအရာဖြစ်ပေနှင့်အတူစတင်ခဲ့သည်။ Connor နှင့် Oliver တို့၏မင်္ဂလာပွဲအတွက် ၀ တ်ဆင်ထားသော Bonnie သည် Laurel ၏ကလေးငယ် Christopher ကိုဆီးနှင်းများမှဆွဲယူ။ လျင်မြန်စွာလမ်းလျှောက်ထွက်ခွာသွားသည်။ သို့သော်သူမမည်သည့်နေရာတွင်ရောက်ရှိနေသည်သို့မဟုတ်အဘယ်သို့ဖြစ်ပျက်နေသည်ကိုမသိရှိမီ၊ Bonnie သည်ဖရန့်ခ်၏အိမ်၌ရှိပြီး Christopher နှင့် Laurel တို့သည်ထိုတွင်နေထိုင်ခြင်းမရှိတော့ပါ။
Annalize နောက်ဆုံးတွင်နေရာအသစ်သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီးသူမသည်ဥပဒေရေးရာပြaboutနာများအတွက်စိတ်ပူစရာမလိုတော့။ နောက်ဆုံးတွင်သူမအတွက်အလုပ်အသစ်နှင့်အတူဝင်ငွေအချို့ရရှိနေသည်။ ဖြစ်ကောင်းရာသီ 1 ကတည်းကပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အဘို့, သူမနောက်ဆုံးတော့သူမနေထိုင်ရာသူ့ကိုယ်သူနှင့်အတူငြိမ်းချမ်းရေးမှာပုံရသည်။
ငှားနေတဲ့ကြယ်ပွင့် 2018 ကိုဘွားမြင်၏
ဆက်စပ်ပုံပြင်:Netflix တွင်အကောင်းဆုံးတီဗွီအစီအစဉ်သစ် - အောက်တိုဘာ
မည်မျှကြာရှည်လိမ့်မည်ဟုမည်သူမဆို၏ခန့်မှန်းသည်, သို့သော်ဤပြပွဲနှင့်အတူကြောင့်ဖြစ်ကောင်းရှည်လျားသောအဘို့မဟုတ်ပါ။ သို့သော် Annalize နေရာအသစ်သို့ရွှေ့ဖို့တစ်ခုတည်းသောမဟုတ်ခဲ့ပေ။ ဂါဗြေလသည်သူ၏အခန်းဖော်အားဖြင့်နှင်ထုတ်ခံခဲ့ရသဖြင့်သူသည် Asher မှခန်းမကိုဖြတ်ကျော်သွားခဲ့သည်။ ဂါဘရီရယ်လ်မသိသောအရာကဖရန့်ခ်သည်သူ၏အခန်းဖော်အားသူ့ကို (သူမနှင့်အိပ်ပြီးနောက်) ပေးချေရန်ဖြစ်သည်။ ဂါဗြေလလုပ်နေတာတွေကိုသူမြင်ပြီးနားထောင်နိုင်တယ်။
ဤအဖြစ်အပျက်တစ်လျှောက်လုံးတွင် Laurel သည် daycares များစွာမှငြင်းပယ်ခြင်းကိုခံနေရသည်။ သူမကျောင်းတွင်သို့မဟုတ်အလုပ်တွင်လိုအပ်သည့်အခါသူမမှာ Oliver နာရီ Christopher ရှိသည်။ Annalize သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်အမှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ကူညီရန်အတွက် Oliver ခေါ်ဆိုသည့်အခါသူက Laurel ရဲ့ chagrin အများကြီး, ဖရန့်ဖို့ကလေးထိန်းတာဝန်ချွတ်လက်။ သူမသည်သူမ၏မိခင်ဘယ်လောက်ရွားလှခရစ္စတိုဖာပြောပြပါတယ်သောအခါသူမနောက်ဆုံးတော့အစီအစဉ်ကိုအတူတက်လာပါတယ်။ အစီအစဉ်သစ်ကဘာလဲ။ သူမ၏ဖခင်၏ရှေ့နေများအားရဲအားရဲအားနှင်ထုတ်သူသည်သူမ၏မိခင်ဖြစ်သည်။ သူမသည်အမှန်တကယ်သူ့ကိုထွက် ratted ပြီးတော့ Teagan ဥပဒေရုံးရဲ့ daycare အစီအစဉ်တွင်သူမ၏စာရင်းသွင်းရန်ရရှိသွားတဲ့သူ Tegan шанဖို့ဤအမှုကိုပြု။ ပြProbleနာဖြေရှင်း ... ကောင်းပြီ, မျိုး။
Annalize သည်သူမ၏တရားဝင်ဆေးခန်းရှိကျောင်းသားများကိုသူမနှင့်အတန်းအရေးယူမှုဆိုင်ရာတရားစွဲဆိုမှုကိုအနိုင်ရပြီးနောက်တွင်ထပ်မံစစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်ကိုတင်ပြသည်။ အမှု၌မူဆလင်အမျိုးသမီး Nanda Hashim သည်သူမ၏ဇနီးအားသတ်မှုဖြင့်စီရင်ခြင်းခံခဲ့ရသည် သူမသည်အပြစ်ရှိကြောင်းဝန်ခံသော်လည်းသူမ၏အများပြည်သူကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူစနစ်တကျကြောင်းအသနားခံ၏အကျိုးဆက်များကိုသူမ၏အကြောင်းကြားခဲ့ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကပါပဲ Michaela သည်စာသင်ခန်းအတွင်းအကောင်းဆုံးနည်းဗျူဟာများထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်သူမအနေဖြင့်တရားစွဲဆိုပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ Michaela သည်အမှုကိုကိုင်တွယ်ရန်ကြိုးစားသည့်အခါ Nanda ကိုအနိုင်ရလိမ့်မည်ဟုကတိပေးသည့်အခါ Annalize ကသူမကိုသတိပေးသည်။ သူတို့ကတရားရုံးမှာအစိမ်းရောင်ကဒ်အတွက်သာဖြစ်တာ Nanda ရဲ့လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုအကြောင်းသိသွားတဲ့အခါသူတို့အံ့အားသင့်ခဲ့ကြပေမယ့်အိုလီဗာရဲ့အပြန်အလှန်အားဖြင့် Nanda ရဲ့ဇနီးသား Josh ဟာလူမျိုးရေးခွဲခြားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသို့ပိုက်ဆံပို့နေပြီး Annalize သည်ရပ်တည်ချက်အပေါ်မေးခွန်းထုတ်ခဲ့သည်။ သူသည် Nanda နှင့် Annalize နှစ်ခုလုံးတွင်လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုနှင့်အစ္စလာမ်မုန်းတီးရေးဝါဒမှတ်ချက်များကိုစတင်အော်ငေါက်သည်။ သူသည်သူ့အမေကိုသတ်ပြီးပထမအဆင့်လူသတ်မှုဖြင့်တရားစွဲခံရပြီး Nanda ကိုလွှတ်ပေးခဲ့ပြီးအစိမ်းရောင်ကဒ်အသစ်တစ်ခုပေးခဲ့သည်။
netflix ပေါ် pg-13 ထိတ်လန့်ရုပ်ရှင်
Bonnie အတွက်နယူး Romance
Bonnie နှင့်သူမအလုပ်ရှင်အသစ်ဖြစ်သည့် Inter DA DA Ronald Miller တို့သည်ပြသနာများပြီးကတည်းကပရောပရည်လုပ်ခဲ့ကြသော်လည်းသူ၏ရုံးခန်းတွင်အတူတူအိပ်ကြသောအခါအရာရာသည်တရားဝင်ဖြစ်လာခဲ့သည် အပြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားရပြီးအကျင့်ဟောင်းတွေကိုထပ်လုပ်နေသလိုပဲသူမက ၀ န်ခံဖို့ချက်ချင်းပဲထွက်သွားတယ်။ သူမကသူမဘာလုပ်နေလဲနေသမျှကာလပတ်လုံးသူမပျော်ရွှင်ရဲ့အဖြစ်ဒဏ်ငွေကြောင်းသူမ၏စိတ်ချ။ Annalize, အခြားတစ်ဖက်တွင်, တစ် ဦး ကွဲပြားခြားနားထင်မြင်ချက်ရှိပါတယ်။ Bonnie သည်ညစာအတွက် Annalise နေရာအသစ်သို့သွားသောအခါ Annalize ကသူမသည်သူမနှင့်သူမနှင့်သူမပါဝင်ပတ်သက်ရန်လုပ်ခြင်းသည်မိုက်မဲသောအရာဖြစ်သည်ဟုပြောခဲ့သည်။ Bonnie ကစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးသူမတစ်ချိန်ကပျော်ရွှင်ချင်နေတယ်လို့ Annalize ကိုပြောတယ်။ သူ Bonnie ၏နတ်ဆိုးဟောင်းများသည်သူမ Annalize ကိုပြောသည့်အခါသူမဖိုင်တွင်ပါသောအရာများကိုသူတွေ့မြင်ပါကသူမနှင့်ဘာမျှမပတ်သက်လိုဟုပြောကြားခဲ့သည်။
Nate နေဆဲကလေး Bonnie ရဲ့ဖိုင်ထဲမှာသူသည်စုံစမ်းစစ်ဆေးနေသည်။ ဖိုင်မှ DNA သည်သူ့ကိုပျောက်ဆုံးနေသောကလေးများအဖွဲ့အစည်းသို့ပို့ဆောင်ပေးသည်။ မှန်ကန်သောပုံစံများကိုလက်မှတ်ထိုးပြီးနောက်သူသည်မွေးပြီးမကြာမီကလေးကိုပြန်ပေးဆွဲခံရပြီး၎င်းကိုပြုလုပ်ခဲ့သည့်မိန်းကလေး၏ရုပ်ပုံကိုပြသည့်အခါသူမသည် Bonnie လူငယ်တစ် ဦး နှင့်တူသည်။ ဒီကလေးက Gabriel Maddox ဟုတ်မဟုတ်မသိရသေးပေမယ့်ပြန်ပေးဆွဲမှုကလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ် ၂၀ ကဖြစ်ခဲ့တာပါ။
အပိုင်း ၂ တွင် Annalize သည်သူဌေးအသစ် Emmett Crawford နှင့်သူမမည်သည့်ကိစ္စများဆောင်ရွက်ရန်တိုက်ပွဲဝင်နေသည်ကိုလည်းပြသခဲ့သည်။ Oliver နှင့် Connor က Michaela အားဒုတိယအကောင်းဆုံးလူသားအဖြစ်သတ်မှတ်ကာ Asher သည် DA နှင့်ကြားဖြတ်အစိုးရ DA တွင်အလုပ်ရခဲ့သည်။ ထိုအခါဇာတ်လမ်းကစတင်ခဲ့သည်ဘယ်မှာနီးပါးအတိအကျအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ Bonnie သူ့ကိုတက်သန့်စင်ရ Connor နှင့်အိုလီဗာရဲ့မင်္ဂလာဆောင်မှာအများပြည်သူရေချိုးခန်းသို့ခရစ္စတိုဖာတင်ဆောင်တက်အဆုံးသတ်ထားသည်။ ခဏအကြာတွင် Michaela နှင့် Laurel တို့သည်လမ်းလျှောက်လာရာ Laurel သည်သူမ၏ကလေးကိုပါတီသို့ပြန်ခေါ်သွားပြီး Michaela သည် Bonnie ၏ခြေရင်းကိုကြည့်နေသည်။ Bonnie တွင်ခြေထောက်တွင်သွေးရှိသည် ဖြစ်၍ Michaela က၎င်းကိုမြင်သောအခါမည်သူသည်သွေးဖြစ်သည်ကိုသိရန်တောင်းဆိုသည်။ မျှော်လင့်ကျနော်တို့လာမယ့်သီတင်းပတ်အတွင်းထွက်ရှာတွေ့!
အသစ်ဖြစ်စဉ်များ လူသတ်မှုနှင့်အတူမည်သို့ဝေးရနိုင်ပုံ 10 p.m. မှာကြာသပတေးနေ့ထုတ်လွှင့ ABC ရုပ်သံပေါ် ET ။
နောက်တစ်ခု:လူကြိုက်အများဆုံး Netflix ကနိုင်ငံတိုင်းမှာပြ
နေ - အိုးအချစ်နှိုးစက်
wentworth တစ်ရာသီ 8 ရှိရလိမ့်မည်
cobra kai ရာသီ2ကောလာဟလ
Netflix အပေါ် addams မိသားစုဖြစ်ပါသည်